प्रकाशित 01 / 27 / 2018 by Dr. Patrick Young मा लेखियो टेस्टोस्टेरोन Enanthate. यो संग 12 टिप्पणिहरु.
टेस्टोस्टेरोन एन्थेटेट के हो?
पिघल बिन्दु: 34-39 ℃
भण्डारण अस्थायी: 2-8 ℃
रङ: सेतो क्रिस्टलीय पाउडर
हामी सबै पाउडरहरू> 98% को उच्चतम शुद्धतालाई ग्यारेन्टी गर्दछौं, र किनकि हामी निर्माता होइन खुदरा विक्रेता होइनौं, यहाँ यहाँ सबै वस्तुहरू सीधा बेचेको छ।
2) प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रियालाई सराहना गरिनेछ, तपाईको सुझावहरूले हामीलाई हाम्रो सेवा सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ, र यो सबै क्लाइन्ट आवश्यकताहरु पूरा गर्न हाम्रो जिम्मेवारी हो।
3) AASraw स्ट्रिइड कच्चे माल को सर्वश्रेष्ठ विश्वसनीय सामान संग, राम्रो सेवा संग सुरक्षित र तेजी देखि शिपिंग को सबै भन्दा विश्वसनीय सप्लायर मध्ये एक हो।
12 प्रतिक्रिया टिप्पणिहरु
रोनाल्ड जे Rapacciuolo10 / 23 / 2018 मा 12: 33 बजे
खरीद गर्न चाहने परीक्षा ई र 100 ग्राम को 100 ग्राम मूल्य र जानकारी जान्न को लागि पैसा ग्राम पठाउन को आवश्यकता हो। वा पैसा अर्डर।
जन क्रमेर10 / 22 / 2018 मा 9: 11 बजे
केहि टेस्ट ई, टेस्ट सी र केहि डेका खरिद गर्न रुचाउँछन्। मैले सुनेको छु तिम्रो साथीहरु सुरक्षित र वैध छन्। कृपया मलाई फर्कनुहोस्।
जेरेमी बटलर10 / 22 / 2018 मा 4: 29 बजे
100 ग्राम पाउडर खरिद गर्न चाहानुहुन्छ। काम गर्न नयाँ। सहकर्मीले मलाई यो बारेमा बताए।
डेव09 / 14 / 2018 मा 7: 36 बजे
500mg परीक्षण ई पाउडरका लागि कति र म कसरी खरीद गर्छु
Dr. Patrick Young09 / 02 / 2018 मा 8: 59 बजे
ठीक छ, हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडै सम्पर्क गर्नेछौं।
क्रिस्टोफर09 / 01 / 2018 मा 5: 37 बजे
खरीद गर्न चाहानुहुन्छ परीक्षा ई को 100 ग्राम र Deca को 100 ग्राम को मूल्य र जानकारी जान्न को लागी मुद्रा ग्राम पठाउन को आवश्यकता हो
Dr. Patrick Young08 / 01 / 2018 मा 9: 56 बजे
ठीक छ, हामी तपाईंसँग सम्पर्कमा पुग्नेछौं
रबर्ट बुकेल08 / 01 / 2018 मा 2: 13 बजे
नमस्ते त्यहाँ टेस्टोस्टेरोन एनाथेटको 100 ग्राम मलाई कति खर्च गर्छ? अनि नीदरल्याण्डमा शिपिंग लागत कति कति हो?
Dr. Patrick Young07 / 10 / 2018 मा 8: 50 बजे
ठीक छ, म तपाईंको मेलबक्सलाई सम्पर्क गर्नेछु।
हैथमम ए07 / 10 / 2018 मा 12: 53 बजे
टेस्ट एनाथेट को 25 ग्राम किन्न्न्न्न्, ओन्टारियो, क्यानाडामा पठाइयो
एडवर्ड कोर्लेट06 / 24 / 2018 मा 5: 55 बजे
म यसलाई क्यानाडामा प्राप्त गर्न सक्छु
होमर सिम्पसन04 / 05 / 2018 मा 8: 14 बजे
अरे मलाई केहि परीक्षा चाहिन्छ। वाशिंगटन राज्यमा तपाईं यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ?
देखि टेस्टोस्टेरोन propionate पाउडर को परिभाषा गाइड	प्राकृतिक स्रोत Orlistat पाउडर वजन घटाने को लागि - एक अचम्मको मोटो हानिकारक औषधि तपाईलाई थाहा छ !!!